आफ्नै बाउले रन्डि बनायो - Desi Sexy Stories
Home » Nepali Sex Stories » आफ्नै बाउले रन्डि बनायो
चिक्न र चिकाउन मन पराउने सबैलाई | एक लाँडो सन्काएर स्वागत | धेरै दिन भा थ्यो, फेस केटी नचिकेको । हिजो राती ठमेलमा १५ वर्षकी भालु उमा फेला परी । तर चिक्नु भन्दा पहिले तेस्ले जुन कथा भनी म आफै स्तब्ध भएँ, त्यसको जिवन कथा यहाँ लेखुम कि नलेखुम भन्ने दोधार भइरहेको छ । त्यसको बाउले १३ वर्षको उमेरमै त्यसको सिल फोडेछ………
ठमेलको रेष्टुरेन्टमा एउटा चिनेको साथिले त्यो केटीलाई लिएर आयो । रातभरलाई हजार रूपैयाँमा मिलाइयो । क्षेत्रीपाटीको गेष्ट हाउसमा लिएर गएँ । जाँठीका फाँचा कत्रा कत्रा भने, दुइ हातले मोल्नु पर्ने । ट्याक्सीमै फाँचा मोल्दै लगेँ ।
गेष्टहाउस पुराएर दुइ बोतल बियर मगाएँ, केटीलाई नांगै पारेर वियर खाँदै ठोक्दै गर्नुको मज्जै बेग्लै । बियर, मासु, भटमास खाँदै केटीका दूध खेलाउन थालेँ
तिम्रो नाम के नि
उमा …उमा के नि
उमा भने छि उमा नी मेरो जातलाई तपाईले चिक्ने होइन, पूति चिक्ने हो
जाँठी त जब्बर रैछे भनेर हो, पूतिमाया हो, भन्दै आफूतिर तानेँ । हुन पनि जे जात भए पनि मलाई के सरोकार भनेर ओठ चुसेँ । मुखभरि बियर हालेर उमाको मुखैभित्र खन्याइ दिएँ । चार बोतल बियर खाएपछि म पनि रन्की सकेको थिएँ । जुठो बियरले त्यसलाई पनि लाग्न थालेछ ।
लाँडो चुस्न लगाको त…… रून पो थाली
माचिक्ने तिमेरू लोग्ने मान्छे सपै उस्तै हौ, माचिक्ने बाउले १३ वर्षको उमेरदेखि चिकेर रन्डी बनायो, अब लाँडो चुस्न लाउँछौ…….
भन्दै गाली गरी ।
जाँठी रन्डी फ्रीमा लगाको हो र चिक्ने तलाई हजार रूपैयाँ केका लागि देको त मैले गालामा थप्पड लगाउँदै भनेँ । बरू जति चिक्नु हुन्छ, जसरी चिक्नु हुन्छ चिक्नु लाँडो त मरी गए चुस्तिन भन्दै उ ओच्छ्यानमा पल्टिदिइ । मेरो पनि लाँडो सन्किसकेको थियो, चुसिन भन्दैमा छाड्ने कुरा त थिएन । विस्तारै त्यस्का नौनीका पहाडजस्ता दूधका पोका माड्दै, एउटा हातले त्यसको मुजी खेलाउँदै, ओठसोठ चुस्न थालेँ ….अनि बाउले नै भ्यायो त….. …..के बाउ भन्नु माचिक्नेलाई….मलाई १३ वर्षको उमेर देखिनै चिकेर माचिक्नेले रन्डी बनायो…… …कसरी नि?…………………..मेरो आमा म १३ लागेपछी मरीन्, घरमा बाउ र ममात्रै….बाउ मज्दूरी काम गर्थ्यो …एक दिन राती सूति राको थिएँ । माचिक्ने रक्सी खाएर आएछ र मेरो फ्रक सारेर तिघ्रा सुम्सुम्रयाउँदै रहेछ । बिउँझेर के गरेको बाउ भनेर जुरूक्क उठेर बसेँ…. चुप….साला….तेरा दूधमा पानी भरनु परो । तेरी आमा मरी गई, माचिक्ने, अब मैलै कल्लाई चिक्ने?…..तँ छेस…तेरै पुती काम लाग्छ.. भन्दै मलाई समातेर लडायो । नाई बाउ नाई नगर, भन्दै मैले आफूलाई बचाउने प्रयास गरेँ ।
त्यत्रो ३९ वर्षको बलियो लोग्ने मान्छेसँग मेरो के लाग्थ्यो।
चुप…साला बढ्ता बोलिस भने मारेर त्रिसुलीमा फाल्दिन्छु भन्दै मेरो फ्रकस्रक पल्टाएर कट्टु नै च्यातिदियो ।
अनि त्यसको यत्रो फलामजस्तो लाँडो मेरो पुतिमा गाडो…….
…..कस्तो दुखो भनेँ, मेरो त मुटु नै फुटेजस्तो भयो…..
म रून कराउन थालेँ ……
रक्सीले मातेको बाउले मेरो पुति च्यातिउन्जेल चिको । मेरो कलिलो पुतिबाट ह्वालह्वालति रगत आयो…..
त्यसपछी एक दिनमात्र होइन, दुई दिनमात्रै हइन, दिन दिनै चिक्थ्यो । पुति च्यातिएको घाउ दिन दिनै दुख्थ्यो । मलाई त मर्नु हुन्थो, अलि अलि गर्दै बानी परो….
एक वर्ष सम्म त बाउकै स्वास्नी भएर बसेँ, अनि एक दिन गजुरी आएर एउटा ट्रकमा चढेर काठमाण्डू आएँ । काठमाण्डू आउँदा एक पैसा पनि थेन ।
त्यही ट्रक ड्राइभरले सय रूपैयाँ दीयो । त्यो दिन बल्खुमा त्यसकै ट्रकमा सुतायो । रविभवनको क्याबिनमा काम लगाइ दियो । त्यहा ६ मैना जति काम गरेँ, माचिक्ने साहू गाहकहरू ले हाम्रो दूध माडेर काखमा राखेर चिक्ने, त्यो माचिक्ने साहू त हामीलाई पैसै नदिने ।
आजकल चैँ कन्टाकमा काम गर्छु । पैसा पनि आफैलाई, मज्जा पनि आफैलाई